အသက်အရွယ် 27 - ငါခံစားရသင့်တယ်လူယောက်ျားကဲ့သို့ခံစားရသည်။ လူမှုစိုးရိမ်စိတ်သွားပြီ! - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
အသက် ၂၇ - အမျိုးသားတစ် ဦး ခံစားသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုသွားပြီ!
ငါသက်သာတယ် လူတစ်ယောက်ခံစားရသင့်တယ်လို့ငါခံစားရတယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအများကြီးအောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါအထက်တန်းကျောင်းအကြောင်းကိုကတည်းက undiagnosed လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုခံစားနေရပြီးပါပြီ။ ငါကလူဝန်းကျင်မှာစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။
ငါပိုပြီးမကြာခဏ fapping စတင်ခဲ့သည့်အချိန်တစ်ဝှမ်းကယ့်ကိုစတင်ခဲ့တူသောငါခံစားရတယ်။ အထူးသဖြင့်ငါအုပ်စုတွေရှေ့မှာစကားပြောတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်တင်ဆက်မှုလုပ်တဲ့အခါ။ ငါဒီလိုအထက်တန်းကျောင်းကတဆင့်လုပ်ခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းများနှင့်မိန်းကလေးများပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပါတီပွဲများ၌အရက်သည်ကျွန်ုပ်အားပိုမိုပွင့်လင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရန်ကူညီခဲ့သည်ဟုထင်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်အရက်မသောက်တော့တဲ့အချိန်မှာ၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအယုံအကြည်မရှိတာကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့စွမ်းအင်ကိုဖုံးကွယ်ထားလိုက်တယ်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင်စတင်ပုပ်ပေါက်နေသောအသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိသည့်အလေ့အထသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိခဲ့ပြီးနေ့စဉ်လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ငါ၌မိန်းကလေးငယ်များ၊ လိင်များများစားစားရှိခဲ့သည် (ED နှင့်ပတ်သက်သော ED ပြissuesနာအချို့ရှိသည်) ငါပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်ညာဘက်ခံစားခဲ့ရဘူး။
ကျွန်မကောလိပ်ကနေတဆင့်လုပ်ပြီးတော်တော်လေးကောင်းသောအလုပ်ဆိုတော့တက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာငါ့အလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်ရောင်ကြောင့် interaction ကများများပါဝင်ပတ်သက်။ တစ်ဦးကအခွအေနေနောက်ဆုံးတော့ဒီ fix ဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာဖွေဖို့ကျွန်မကိုဦးဆောင်လမ်းပြအကြောင်း 100 ရက်အကြာကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖို့အကြောင်းခဲ့ကြသည်လူမျိုး၏တစည်းနှင့်အတူအစည်းအဝေး၌ရှိ၏။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အခန်းပတ်ပတ်လည်သွားနှင့်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်သို့ဆိုခဲ့ရတယ်။ အကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးသကိုငါမအကြောင်းပြချက်များအတွက်အာရုံကြောကြီးပြိုင်ကားခဲ့သည်။ ငါ၏အသံကိုတုနျလှုပျနဲ့ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြေဆိုနိုင်ကြောင်းအလွယ်ကူဆုံးဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေကြားသကဲ့သို့ငါ၏စိတ်ကို fogged ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ၏တစ်ခုလုံးကိုဆယ်ကျော်သက်များနှင့်နှစ်ဆယ်ကျော်ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေများတုံ့ပြန်နေထိုင်ခဲ့နှင့်အဲဒါကိုအကြောင်းကိုတစ်ခုခုလုပ်မအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါအချို့သောသုတေသနပြု yourbrainonporn နှင့်ဤ nofap အနှံ့သို့ရောက်ကြ၏။ အဲဒီမှာလျော့နည်းသွားလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏စူပါပါဝါပုံပြင်များအများကြီးခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်ငါကတစ်ဦးသွားလာရင်းပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အထိတဦးတည်းလစ်ခဲ့မြင်းပေါ်ပြန်ရတယ်, ဒီမှာယနေ့ငါဖြစ်၏။
ငါအရမ်းအများကြီးပိုခံစားရတယ်။ ဘယ်ကနေစရမှန်းကိုမသိဘူး။ ငါပထမ ဦး ဆုံးရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်ငါ့ဌာနရှိမည်သူမဆိုတစ်ခုခုပြောနိုင်တူသောခံစားမှုမှတ်မိသေးတယ်။ ငါအရင်ကဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြောက်နေရတာလဲလို့စဉ်းစားမိတယ်။ ဒါဟာတော့ဘူးကြောင်းလမ်းဖြစ်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။
ကိုယ့်ပြားချပ်ချပ်-စီတန်းအကြောင်းကို 30 ရက်အကြာမှာနှင့်ပြန်လာစိုးရိမ်စိတ်အချို့လက္ခဏာတွေခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့အမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုကုသပေးဖို့ FAP လိုသောရှိနေသော်လည်းကအတူ flyer ။
တစ်နေ့တာ ၅၀ တွင်ပြန်လည်ခံစားမှုခံစားလာရပြီးခံစားမှုကိုဖော်ပြရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ငါအရင်ကထက်ပိုပြီးအစိုင်အခဲများနှင့်တည်ငြိမ်ခဲ့တူသောငါခံစားရတယ်။ ငါရည်မှန်းချက်အသစ်များကိုလိုက်ရန်ယုံကြည်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ်သည်အလုပ်သစ်တစ်ခုကိုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အရင်တုန်းကဒီဟာကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတွေးပဲ။ အင်တာဗျူးတွေကနေအေးအေးဆေးဆေးနေလို့မရဘူး။ ငါအင်တာဗျူးနှစ်ခုသို့သွား။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးစင်ကြယ်သောယုံကြည်မှုနှင့်အတူ aced (သူတို့ကတကယ်ပျော်စရာခဲ့ကြသည်!) နှင့် 50 အံ့သြဖွယ်အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုတယ်! တ ဦး ကိုယူ။ ယခုငါငါ့အလုပ်သစ်မှာမြည်းကန်တယ်။
ငါထွက်သွားပြီနှင့်ပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေပဲငါ့ဆီသို့လမ်းလျှောက်စကားပြောစတင်။ ကျမတို့သူငယ်ချင်းများနှင့်လှပသောကြက်ကလေး ၂ ကောင်နှင့်အတူအိမ်သို့သွားပြီးအခြားတစ်ညတွင်ဘားတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဂိမ်းကသဘာဝပဲ။ မိန်းကလေးငယ်များနှင့်စကားပြောသောအခါထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြီးအေးခဲသွားသည်။ ငါ့ကိုယုံတယ်မယုံနိုင်ဘူး!
အခု ၉၀ ကျော်ပြီ။ ငါ့ကောင်တာနောက်ကျတယ်။ တစ်ခါတလေ porn အကြောင်းစဉ်းစားမိတယ်။ ဒါပေမယ့် noFap ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကတော့အားနည်းချက်တွေကိုအလေးထားတယ်။ နောက်တဖန် porn ကိုကြည့်ဖို့စီစဉ်မထားပါနဲ့။
တစ်ချိန်ချိန်တွင်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကိုကျော်ချင်ပါတယ် တစ်ခါတလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီလိုလုပ်မိတာကိုငါဖမ်းမိတယ်၊ ပြီးတော့ငါဟာလူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆင့်အတန်းနည်းနည်းလေးနဲ့ရှိနေသေးတုန်းပဲလို့ငါထင်တယ်။ ဒီယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်ပေးပေမဲ့လည်းတင်ဆက်မှုကြီးတွေမှာကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားနေရတုန်းပဲ။ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်သစ်တွင်လူ ၆၀၀ ရှေ့တွင်စကားပြောခဲ့ရသည်။ နှလုံးခုန်သံနှင့်ငါ့လက်များချွေးထွက်လာသည်ကိုခံစားခဲ့ရသည်။ သို့သော်လူအများစုကထိုအတိုင်းခံစားကြလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ လူထုရှေ့စကားပြောခြင်းအားဖြင့်အတွေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုကအကူအညီဖြစ်စေတယ်၊ ​​ငါစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေတဲ့ဓာတုဓာတ်ပြုမှုကိုရရင်၊ ငါဟာငါ့လိုစစ်မှန်တဲ့ခံစားချက်မျိုးမခံစားရစေတဲ့ဓာတုဓာတ်ပြုမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပါ။ ။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကိုအဲဒီလိုတုန့်ပြန်နိုင်အောင်အကျင့်ဆိုးတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ဦး နှောက်ကအနာရောဂါပျောက်ကင်းနိုင်တယ်၊ ငါဟာငါထက်အများကြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်။ နှင့်နေ့တိုင်းက၎င်း၏ပိုကောင်းလာမယ့်။
TL; DR: Fapping အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်စေ၏။ တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်လာပြီးနောက်ကအကြောင်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ မြည်းကိုကန်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
LINK - 90 Days - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိကြောင်း၊
နောက်ဆုံးထွက် - ရက်ပေါင်း ၁၅၀ - ငါနောက်ဆုံးမှာတစ်သက်တာလုံးစိုးရိမ်စိတ်ပျောက်နေတယ်
ငါရက် ၁၅၀ အမှတ်အသားကိုကျော်ပြီးတက်လိုက်တာ။ သတိပြုမိတဲ့အဆင့်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုကျွန်တော်သတိထားမိလိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်မှုများကိုအမှန်တကယ်ကူညီပေးသည့်နည်းစနစ်အသစ်တစ်ခုကိုသွားမည်။
ငါအလယ်တန်းကျောင်းနေကတည်းက nofap နှင့်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ သမိုင်းမှတ်တိုင်ကာလအတွင်းပိုမိုရှည်လျားစွာရေးခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ဤမှတ်တမ်းကိုနောက်တစ်ခါထပ်မံမရေးသားတော့ပါ။ ဒါပေမယ့်ကောလိပ်ကျောင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုပြcreatedနာတွေအများကြီးဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ကောလိပ်တက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအလုပ်ကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ဟာယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ပေမယ့်အလုပ်ကောင်းကောင်းရဖို့လုံလောက်ပါတယ်။ လူတို့နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်းသည်ခက်ခဲသည်၊ သို့သော်ယခု၎င်းသည်အတိတ်ကဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်းငါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲ၊
ကျွန်ုပ်၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းဘဝ၌ကျွန်ုပ်အကြီးမားဆုံးပြissuesနာတစ်ခုမှာလူထုရှေ့စကားပြောခြင်းဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးတွေကို ဦး ဆောင်ပြီးအုပ်စုတွေရှေ့မှာတင်ပြရမယ့်နေရာတွေမှာကျွန်တော်တက်ခဲ့တယ်။ ဒါကငါ့အတွက်အကြီးမားဆုံးကြောက်စိတ်ပဲ။ ဒီအခြေအနေမျိုးကိုရှောင်ရှားဖို့ငါကြိုးစားနေတယ်။ ငါရှက်စရာအချိန်များစွာရှိခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ခုခုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်မှုများကိုမူးယစ်ဆေးဝါးဖြင့်မသောက်လိုသောနေရာတွင် Googeling ကိုအဖြေရှာရန်စတင်ခဲ့ပြီး nofap ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်မျက်စိဖွင့်ပေးသောဤ sub-reddit အပါအ ၀ င်အရင်းအမြစ်များစွာကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ငါကတစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ပေးပြီးတစ်ပါတ်အကြာတွင်အံ့သြဖွယ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသတိပြုမိသည်။ ကြီးသောအမှုတို့ကိုဖြစ်ပျက်ဆက်လက်။ (ငါ့အ 90 နေ့ကညျ့ပါ)
အကြှနျုပျ၏လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်အရူးနဲ့တူလျှော့ချစတင်ခဲ့သည်။ ငါကြီးမြတ်တိုင်းတာရလဒ်များကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ့စကားသံကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာလှုပ်ဖို့အသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိုသို့နီးပါး Non-တည်ရှိခဲ့တဲ့အချက်မှရတယ်။
ငါနေဆဲပိုကောင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ဖျော်ဖြေရှိနေသော်လည်းသော်လည်းကြီးမားသောတင်ပြချက်များမတိုင်မီသော်လည်းတစ်ဦးနှောက်အာရုံကြောခံစားရတယ်, ငါတစ်ခါတုန်းကနှင့်အလုံးစုံတို့အဘို့ထိုသို့ဖယ်ရှားပစ်ရနိုင်ဘာလုပ်ချင်တယ်။ ငါအများပြည်သူ၌ဟောပြောချင်စေချင်တယ်။
ငါ hypnosis တူသောပစ္စည်းပစ္စယသို့ကြည့်မျှော်စတင်။ ငါ hypnosis အသံ, ဒါပေမယ့်ကြာရှည်မယ်လို့ဘာမျှသုံးပြီးယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းသတိပြုမိသည်။
ငါ NLP (Neuro-ဘာသာစကားပရိုဂရမ်းမင်း) ဟုခေါ်တွင်ဘာလဲအနှံ့သို့ရောက်ကြ၏။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပြည်တွင်းရေးအတွေးဖြစ်စဉ်ကို reprogram ခွင့်ပြုတဲ့ technique ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျစိတ်ကျရောဂါကနေအများပြည်သူစကားပြောတူသောစိုးရိမ်အထိမမှန်ဆက်ဆံဖို့ဒီ technique ကိုသုံးနိုင်သည်။
ငါသုတေသနလုပ်ပြီးအသံပရိုဂရမ်အချို့ကိုကူးယူပြီးကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုသတိပြုမိတယ်။ ငါသုံးတဲ့နည်းစနစ်ကစိုးရိမ်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အခြေအနေ (ဥပမာ - လူထုစကားပြော) ကိုယူပြီး၊ ယုံကြည်မှု၊ ဂုဏ်ယူမှု၊ စိတ်အေးအေးထားမှုအခြေအနေကိုစဉ်းစားပြီးပြalityနာအခြေအနေသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ငါရက်သတ္တပတ်ကျော်တန်ဖိုးရှိအလေ့အကျင့်၌သွင်းထားပြီးအပြောင်းအလဲများကိုတော်တော်လေးမယုံနိုင်စရာများမှာ!
နောက်နေ့ကျတော့ငါလူစုလူဝေးကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုကြီးကြပ်သူက ဦး ဆောင်ခေါ်ယူဖို့မတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်မတ်တပ်ရပ်ပြီးလူ ၂၀ ကျော်ရှေ့မှာအစည်းအဝေးမတက်ဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါလမ်းလျှောက်ထွက်သွားနိုင်ပေမယ့်တကယ်တမ်းမှာဒီအုပ်စုကိုရှေ့မှာ ဦး ဆောင်ပြီးစကားပြောချင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်မသိခဲ့ဘူး ငါယုံကြည်မှုနှင့်စကားပြောနှင့်အစည်းအဝေးကြီးမြတ်သွားလေ၏။ ဤသည်ငါ့အဘို့ကြီးမားသောအခိုက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်သည်။
ဒီ site နှင့်အလေ့အကျင့်အတွက်မဟုတ်ခဲ့လျှင် Nofap ကိုပြန်လှည့်ပါကကျွန်ုပ်သည် NLP နှင့်ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်မှုများကိုဖယ်ရှားပေးသောအခြားအရင်းအမြစ်များစွာသို့ပို့ဆောင်သောယုံကြည်မှုနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိလိမ့်မည်ဟုမထင်ပါ။ Nofap တံခါးကိုဖွင့်လှစ်။
TL; ကောလိပ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသို့သယ်ဆောင်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုမှတဆင့်အလယ်တန်းကျောင်းကတည်းက DR Fapped ။ Nofap အများပြည်သူစကားပြောသက်ဆိုင်သောစိုးရိမ်ပူပန် fixed ။ NLP ပို. ပင်က fixed ။